Tips for Motion Sickness - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကားမူးတတ်တဲ့သူတွဆေိုတာ အခြားသူတွခေရီးသွားဖို့တကျွကွပျောရှငျနခေိန်မှာ …. ကားမူးပွီး လမျးမှာ ပို့အန်မှာ တွေးပူပွီး ကားစီးဖို့တောငျကွောကျနရေသူလေးတွပေါ။ ကားစီးတဲ့အခါ ခရီးတိုပဲဖြဈဖြဈ (ခရီးဝေးဆို ပိုဆိုးတာပေါ့) …ကားစထွကျပွီး နညျးနညျးကွာတာနဲ့ ခေါငျးမူးမယျ…ပို့ချငျအန်ချင်လာမယျ…အန်ထွက်မယျ….ဒီတော့ သွားရလာရအဆင်မပြေ…လူကွားထဲ ဒုက်ခရောက်တာပေါ့။ တစ်ခါတရံ
ကံကောငျးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ ဒြီပသနာဟာ ကွာလာတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယ်က အလေ့အကျငျ့ရသွားပွီး သူ့ဘာသာသူပျောကျသွားတတ်ပါတယျ။ သငျဟာ ကားမူးတတျသူတဈဦးဆိုရငျ သကျသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နညျးလမျးလေးတွကေတော့:
စိတျလျှော့ထားပါ။ ကားမူးမှာကိုအရမျးစိုးကွောက်မနေဘဲ စိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပါ။လမျးတဈလျှောက်မျက်လုံးမှိတ်ထားပါ။အိပ်ချင်လျှငျ အိပ်လိုက်ပါ။ အိပ်မပျောသေးရငျ အသက်ခပျပြငျးပြငျးရှူသွငျးရှူထုတျပြုလုပ်ပါ။အမှတ်စဉျ ၁၀၀ မှ ၁ အထိ ပြောငျးပြနျ စိတ်ထဲမှရေတွက်ပါ။
ရွလျေ့ားနတေဲ့ပတျဝနျးကျငျတွကေို လိုကျကွညျ့မနေဘဲ ကွိမျနတေဲ့ အရာဝတ်ထုတစ်ခုကိုပဲ အာရုံစိုကျကွညျ့ပါ။
ကားမစီးမီ အရကျ၊ဘီယာသောကျခြငျး၊ဆေးလိပျသောကျခြငျး မပြုပါနဲ့။
ကားမစီးမီ အစာကွလွေယ်မယျ့အစားအစာနညျးနညျးသားထားပါ။(အစားလုံးဝမစားခြငျး၊ ပြညျ့အငျ့အောင်စားခြငျးမပြုရ။)
*ခရီးရှညျသွားရမည်ဆိုလျှငျ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပငျပွီး လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးများကွိုတငျသောကျသုံးပါ။
*ကားပျေါကဆငျးပွီးသညျအထိ ကားမူးခြငျးလက်ခဏာတွကေို ပြငျးထန်စွာ ဆက်လက်ခံစားနရေပါက ဆရာဝန်နှငျ့ပြသပွီး ကုသမှုခံယူပါ။
ကားမူးတတ္တဲ့သူတြေဆိုတာ အျခားသူတြေခရီးသြားဖို့တက်ကြေပ်ာ်ရွှင်နေခ်ိန္မွာ …. ကားမူးပြီး လမ်းမွာ ပ်ို့အန္မွာ တြေးပူပြီး ကားစီးဖို့တောင်ကြောက်နေရသူလေးတြေပါ။ ကားစီးတဲ့အခါ ခရီးတိုပျဲဖစ်ျဖစ် (ခရီးဝေးဆို ပိုဆိုးတာပေါ့) …ကားစထြက်ပြီး နည်းနည်းကြာတာနဲ့ ခေါင်းမူးမယ်…ပ်ို့ခ်င်အန္ခ်င္လာမယ်…အန္ထြက္မယ်….ဒီတော့ သြားရလာရအဆင္မျေပ…လူကြားထဲ ဒုက္ခေရာက္တာပေါ့။ တစ္ခါတရံ
ကံကောင်းတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒျီပသနာဟာ ကြာလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ္က အေလ့အက်င့်ရသြားပြီး သူ့ဘာသာသူပေ်ာက်သြားတတ္ပါတယ်။ သင်ဟာ ကားမူးတတ်သူတစ်ဦးဆိုရင် သက်သာအောင္လုပ္နိုင္တဲ့ နည်းလမ်းလေးတြေကေတာ့:
စိတ်လေ်ွာ့ထားပါ။ ကားမူးမွာကိုအရမ်းစိုးကြောက္မေနဘဲ စိတ္ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပါ။လမ်းတစ်လေ်ွာက္မ်က္လုံးမွိတ္ထားပါ။အိပ္ခ်င္လ်ွင် အိပ္လိုက္ပါ။ အိပ္မေပ်ာ်သေးရင် အသက္ခပ်ျပင်ျးပင်းရွူသြင်းရွူထုတ်ျပုလုပ္ပါ။အမွတ္စဉ် ၁၀၀ မွ ၁ အထိျေပာင်ျးပန် စိတ္ထဲမွေရတြက္ပါ။
ရြေ့လ်ားနေတဲ့ပတ်ဝန်းက်င်တြေကို လိုက်ကြည့်မေနဘဲ ကြိမ်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ္ခုကိုပဲ အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။
ကားမစီးမီ အရက်၊ဘီယာသောက်ျခင်း၊ဆေးလိပ်သောက်ျခင်း မျပုပါနဲ့။
ကားမစီးမီ အစာကြေလြယ္မယ့်အစားအစာနည်းနည်းသားထားပါ။(အစားလုံးဝမစာျးခင်း၊ျပည့်အင့်အောင္စာျးခင်းမျပုရ။)
*ခရီးရွည်သြားရမည္ဆိုလ်ွင် ဆရာဝန္နဲ့တိုင္ပင်ပြီး လိုအပ္တဲ့ ဆေးဝါးမ်ားကြိုတင်သောက်သုံးပါ။
*ကားပေါ်ကဆင်းပြီးသည်အထိ ကားမူျးခင်းလက္ခဏာတြေကျိုပင်းထန္စြာ ဆက္လက္ခံစားနေရပါက ဆရာဝန္နွင့်ျပသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။